‘माफ गर छोरा ! तिम्रो मनोमानीको बाधक मै हुँ’ |
प्रकाशित मिति :2019-03-01 13:07:17
साँझ ७ बजेको हुँदो हो, १७ महिनाको छोरालाई तेल लगाइदिँदै थिएँ । बाबु नाङ्गै थियो, भागेर ओछ्यानको कुनापट्टि पुग्यो ।
‘आउ न ढिलो भैसक्यो’ तेलैतेल लागेको हातले छोरोलाई आफूतिर तान्दै भनें । छेउमा बसेर पल्लो घरको दाइले टिभी हेरिरहनुभएको थियो । भन्नुभयो, ‘बच्चालाई उसकै मनोमानी गर्न देउ न ।’
‘हतार छ आफूलाई, जैले यस्तै हो ऊ’ जवाफ फर्काएँ ।
तेल लगाइसकें । बाबु फेरि लुगा लगाउनु अगावै कुँद्यो । टेबुल मुन्तिर गएर चुपचाप बस्यो । बालसुलभ चञ्चलता न हो, सायद लुकें भन्ठान्दै होला ।
खाना खुवाउने, लुगा फेर्ने बेलामा अक्सर यस्तै गर्छ । जे गर्दा नि खेल्दै गर्नुपर्ने, निदाउनु अघि पनि ओछ्यानमा खुब गफिनु पर्ने उसको बानी नै हो । नाक चिमोट्ने, कान कोट्याइदिने, आँखामा औला पसाउने गर्दागर्दै निदाउने उसको बानी छ ।
उसकै अनुसार खेलिदिए अझ ढिलोसम्म सुत्दैन । आफूलाई भने कतिखेर निदाइहाल्ला भन्ने हुन्छ । आफ्नो चटारो अनुसार उसलाई कसरी चलाउनु !
आज हतारमा थिएँ । खाना बसालेर उसलाई तेल लगाइसक्नु थियो । खाना खुवाएर, सुताएर ड्युटी सुरु गर्नुको हतारो ।
दैनिक पत्रिकाको जागिरे म । दिउँसोभन्दा राती खट्नुपर्ने ड्युटी छ । पत्रिकाको डिजाइनलगायत सबैकुरा फाइनल गरेर प्रेसमा पठाउँदा आधार रात ढल्किन्छ । अनि म पनि ओच्छ्यानमा ढल्किन पाउँछु ।
बेलुका दुध चुसाएर छोरो निदएपछि उसको बाबासँग सुताइदिएर काम सुरु गर्छु । काम सक्दा जहिल्यै आधा रात । यसबीचमा २÷३ पटकसम्म उ निन्द्राबाट जाग्छ । ममु… ममु…भन्छ ।
बाबाको शरीर छामेर ‘बुबु’ खोज्छ । आमा काममा छ उसले कसरी स्तनपान गर्न पाउँछ र ! बाबाले ‘हो.. हो…’ भन्दै थुम्थुमाए पछि बल्लबल्ल निदाउँछ ।
आज नि उसैगरि ड्युटी सकें । छोरो २ पटक जाग्यो । बाबाले थुम्थुम्याएपछि निदायो ।
ड्युटी त सकें । तर, मलाई ओछ्यानमा जान मन पटक्कै लागेको छैन । झण्डै ५ घण्टादेखि लगातार छिमेकी दाजुको वाक्य मगनमा उफ्रिरह्यो ।
‘बच्चालाई उसकै मनोमानी गर्न देउ न !’
हो, हामी बालबालिकाको अधिकारका सवालमा ठूलै गफ दिन्छौं । मै पनि परिआए लामै भाषण ठोक्छु । तर, दैनिक जीवनमा लागू हुन्छन् त ?
एउटा नवजात शिशु जन्मदा कति निष्कपट निर्दोष हुन्छ । विस्तारै हामी उसलाई आफ्नैै इच्छा अनुसार चल्ने बनाउँछौं । उसका मनमौजीपना कता हराउँछ कता ।
हाम्रो बाध्यता र विवशताका कारण उसका धेरै हक अधिकार खोसिन्छन् । कतिपय जानेरै त कति अञ्जानवश । सानैबाट संस्कार सिकाउने नाममा ‘ज्ञानी’ बनाउन लागिपर्छौं । आफू अनुकुल बनाउँदै लैजान्छौं । अनि उसले आफ्नो निश्चलता, चल्चलता, निष्कपटता कसरी नभुलोस् ।
बालबालिकाहरु जे गर्दा खुशी हुन्छन्, अक्सर हामीलाई त्यसैले दिक्क बनाउँछ । भान्छाको भाँडाकुडा भुर्इँमा बजार्न पाए बालबालिका खुसी, हामी दिक्क ।
ढोकाछेउको चप्पल अन्यत्र लगेर ताँती लगाउन पाए उनीहरु खुसी, हामी दिक्क । खानेकुरा असरल्ल छर्न पाउँदा उनीहरु खुसी, हामी दिक्क । जमेको पानीमा थ्याप्थपाउँदै खेल्न पाए उनीहरु खुसी,हामी दिक्क ।
एउटा नवजात शिशु जन्मदा कति निष्कपट निर्दोष हुन्छ ।
विस्तारै हामी उसलाई आफ्नैै इच्छा अनुसार चल्ने बनाउँछौं ।
उसका मनमौजीपना कता हराउँछ कता ।
आईरन गरेर पट्याको लुगा छर्न पाए उनीहरुको खुसीमा सीमा नै रहँदैन हाम्रो चाहिँ हैरानी र दिक्कले सीमा नाघ्छ । हामीलाई सँधै कामको चटारोमा हुन्छौं । अझ नेपाली आमाको कामको असीमितताको त कुरै नगरौं । बालचञ्चलतामा रमाएर बस्न कुन आमालाई मन नहँुदो हो र ?
सारा हतारको बाबजुद नानीबाबुलाई दिइने थोरै समय कति पर्याप्त होलान् ? आफ्नै अनुभवले बताउँछ, जागिरे आमाहरुका सन्तान प्राकृतिक रुपमा आफ्ना अधिकार पूर्ण उपयोग गर्नै पाउँदैनन् ।
आमासँग जति बढी समय बिताउन पायो, बालबालिकाहरुको मानसिक विकास उति चाँडो हुने र मानसिक तन्दरुस्त हुने बाल मनोवैज्ञानिकहरुको तर्क छ । स्वस्थ्य विज्ञानको पनि यस्तै तर्क छ ।
एउटा सानो उदाहरण जोड्न मन लाग्यो,
स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार दुधे बालकलाई कम्तिमा १५ देखि २० मिनेट एउटै स्तनपान गराउनु पर्छ । र, दिनमा कम्तीमा ८ देखि १० पटक । बालबालिकाको पूर्ण स्वस्थ्यको लागि कम्तीमा २ वर्ष स्तनपान गराउनुपर्छ ।
म जस्ता जागिरे आमाहरुलाई यो संभव होला ?
सुत्केरी बिदा सकिनासाथ आमा र बालबालिकाको भेटको समय छोटिन सुरु हुन्छ । कार्यलयमा शिशु स्याहार कक्षको अभावदेखि यावत समस्या सर्वविदितै छ ।
दिउँसो मात्रै हैन, मैले त रातको समय पनि छोरालाई पूरा दिन सकिन । कहिले त सारा काम छोडेर बसौं झैं लाग्छ । पत्रकारिता आज नदेखिँदा भोलि हराउने क्षेत्र, अनि मन मान्दैन ।
आफ्नो व्यस्तताको कारण कहिले सन्तानलाई शिशु स्याहारमा पठाउने उमेर होला भनेर अतालिँदै दिन गनेर बसेको छु ।
मलाई थाहा छ, मेरो यो सोच उसको बालबापन खोस्ने एउटा कारण हो । मन झस्किन्छ पनि, मेरो चटारोले छोराको बलाचञ्चलता कुण्ठित होला भनेर ।
यो पनि थाहा छ, बेपरवाह खेल्ने उमेरमा हतार हतार पठाईने मन्टेश्वरीमा उसको बालापन कस्तो फक्रन्छ ? रोजीरोटीको बाध्यता र उसलाई हुर्काउनैको लागि पनि देखिएका तथ्यलाई अनदेखा गर्नुपर्ने कस्तो बिडम्बना !
बालबालिकाहरुको तनाव व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयका प्रशिक्षक डिल्लिराम पाण्डेय भन्छन्, ‘बालबालिकाहरुलाई पूर्व बाल्यावस्था (२ देखि ३ वर्ष) उमेरको बीचमा नै विद्यालयमा पठाउन तिर लाग्नु पूर्णतः गलत हो ।’
उनका अनुसार यो काम उनीहरुको रुचीभन्दा बाहिरको हो । विद्यालयमा उपलब्ध सामग्री अनुसारका क्रियाकलापमा मात्र जोड दिनु उनीहरुको हितमा छँदैछैन ।
बालबालिकाहरुलाई प्रकृतिसँग नजिक राखेर प्राकृतिक रुपमा नै हुर्काउनु पर्छ भन्छन् उनी । हामी भने सुनौला हजार दिनभित्र पनि बालिबालिकाहरुलाई उनीहरुको बालापन आफ्नो चटारो अनुसार चलाउन खोज्छौं ।
सरकार नारा दिन्छ ‘आजका बालबालिका भोलिको देशको भविष्य हुन् ।’ नारामा म पनि सहमत छु । तर, खै न सरकारले भोलिको भविष्यको आधार निर्माणमा आज सशक्त योजना ल्याएको । न त म स्वयंले आफ्नो सन्तानका लागि विशेष योजना ल्याउन सकें ।
म सन्तानकै भविष्यको लागि दिनरात मेहनत गर्छु । उनीहरुको वर्तमान चाहिँ कसरी गुज्रिरहेको छ ? उनीहरु वर्तमानमा के चाहिरहेका छन् ? त्यही मेरो प्राथमिकतामा पर्दैन, परेन ।
कहिलेकाँही आफैलाई प्रश्न गर्छु, मेरो प्राथमिकता आज (वर्तमान) मा छ कि भोलि (भविष्य) मा ? भविष्य राम्रो बनाउन आज कति लगानी गर्ने ।
आजै मेरो छोरा उर्जावान नभए उसको भोलि के होला ? म जस्ता हरेक अभिभावकसँगै र स्थानीय तहदेखिको सरकारले यो मनन कहिले गर्ने ? आफैले पनि मनन गर्न सकिएको छैन । त्यसैले छोरालाई मनमनै भन्छु, ‘माफ गर छोरा ! तिमीलाई मनोमानी गर्न नदिने तिम्रै आमा अर्थात् म हुँ ।’
(पत्रकार दाहाल सञ्चारिका समूह ३ नम्बर प्रदेश शाखाको अध्यक्ष हुन् ।)